Soo dejisan IntelliJ IDEA 2020.3 Ultimate... – Vessoft
Shatiga: Maxkamad, bilaash
Bogga rasmiga ah: IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA – jawi horumarinta ee software-ka diiradda lagu saaray waxqabadka iyo ka-fiirsashada of sameeysa a on hawlaha muhiim ah. IntelliJ IDEA waa inay awoodaan si ay u falanqeeyaan code qoraal kuu ogolaanaya inaad si loo doorto kala duwanaansha ugu habboon ee Otomatik iyo habab kala duwan si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ku dhacdo qaladaad. software ka kooban Tifaftirayaasha dhisay-in inta badan luqadaha barnaamijyada. IntelliJ IDEA taageertaa Qaababka ugu badan sida Java EE, Spring, Grails, Play, Android, GWT, Vaadin, iwm software The la database-user geeyay shaqeeya iyo jaanqaadi nidaamyada kale ee maamulka version. IntelliJ IDEA ayaa sidoo kale waxaa ku jira qalabka si ay u horumariyaan interfaces garaafyada ku user ee.
editor code awood leh
Taageerada ugu Qaababka caadi ah iyo kuwa kala afka barnaamijyadooda
Integration la server codsiga
Horumarinta ee interface garaafyada ku user ee
Shaqo la database
Soo dejisan IntelliJ IDEA
Faallo ku saabsan IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA Xirfadaha la xiriira